Maalgelinta & Maaliyadda | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Maalgelinta & Maaliyadda
Marka laga hadlaayo xagga suuqa, ganacsi walbo wuxuu leeyahay qaab loo sharaxaayo ama ay u qeexaan milkiilayaasha ganacsigaas. Ganacsi walbo waxaa wanaagsan inuu leeyahay qaab loo sharaxi karo markii ay timaado xagga suuqa. Haddii ganacsiga laga bixini karo sharaxaad waxay kuu suurta gelin kartaa inaad fahanto waxaad uga baahantahay inaad sameyso sida suuq geynta markaad sameynayso. Ganacsi hal qof uu leeyahay (Sole proprietorship): Ganacsiga noocaan oo kale ah waxaa iska leh hal qof oo kali ah. Qofka noocaan oo kale ayaa wax walbo oo ganacsigaas rasaamaal u ah iska leh. Sida makiinadaha, kombuyuutaradda IWM. Milkiilaha ganacsiga noocaan oo kale …
Marka aad marayso laamiyada ama jidcaddayaasha halbawlaha ah ee magaaladaada, ama dhex marayso suuqyada waa weyn ee dalka, waxa shaki kaa galayaa in aad Soomaaliya joogto! Sababtuna waxa ay tahay; masawirrada ku dheggan tabeellayaasha suran foolka bakhaarrada, dukaamada, carwooyinka, dhartolayaasha, mayaaqadaha, hudheellada, timejarayaasha, gabdhoqurxisyada, xarumaha duullilmaadka, xarumaha dhardhaqaalka, isbitaallada iyo … iwm. Haddii aad u fiirsato bakhaarrada, dukaamada iyo carwooyinka; waxa aad ku arkaysaa tabbeellyaashooda sawirro gaalo cadcad oo dhar qaba ama saacado. Meelaha dharka gabdhaha lagu iibiyo, waxaa ugu sawiran gabdho carbeed oo cabbaayado qaba ama carruur carbeed oo dharkooda qaba. Xitaa meelaha qabdhaha lagu qurxiyo naago cadcad …
Dhaqaalaha iyo SiyaasaddaMaalgelinta & MaaliyaddaMaamulka Ganacsiga & Suuqgeynta
Guud ahaan marka laga hadlaayo ganacsi waa waxyaabaha u baahan in si diiran loo sharaxo marka la doonaayo in la bilaabo ganacsi. Waxaana wanaagsan in lalla yimaado istaraajiyad cadeynayso siddii aad ku gaari lahayd awooda suuqa ee aad doonayso inaad gaarto. Ganacsi walbo wuxuu lahaani karaa caqabado kala duwan balse marwalbo waxay ku xerantahay qofka ganacsadaha ah sidda uu ugu hortago dhibaatooyinka soo wajahi karo, arrintaasina waxaa lagaaga baahan yahay inaad karti dheeraad leh u leedahay. Waxaa kaloo wanaagsan inaad si fiican u ogsoontahay shaqada hortaallo qofka markuu yahay ganacsade. Ganacsadaha waa qof hal abuur leh, abuura fikradaha cusub ee …
Waxaan rajeynayaa inaad in badan maqashay xisaabaadka ganacsiga. Xisaabaadka ganacsiga oo afka ingiriiska lagu yiraahdo “business accounting”. Mawduucaan wuxuu ku saab-sanyahay qeybaha ama noocyada ay u kala baxaan xisaabaadka ganacsiga “Business accounting”. Waxaa jira wax loo yaqaano buugg-haynta ganacsiga oo afka ingiriiska lagu yiraahdo “bookkeeping”. U jeedada koowaad ee buugg-haynta xisaabta waa in lagu keediyo dhammaan maaliyada ganacsiga. Buugg-haynta waxaad ka heli kartaa dhammaan sidda ay wax u dhaceen haddii ay noqoto in qasaaro soo gaaray ganacsigaada iyo inkale. Waxaadna halkaasi ka qaadani kartaa saadaasha mustaqbalka soo socda. Xisaabta buugg-haynta ganacsiga waxaad si toos ah ugu heli kartaa saadaasha aad …
Aqristaha sharafta leh oo jecel inuu wax ka barto ama ka ogaado qorshaha ganacsiga marka horre isweydii adiga “waa maxay qorsho?” “Qorshaha adiga ayaa kunool ee asiga kuguma noola” maah-maahdaan waxay ahayd “talo adiga ayaa ku nool ee iyada kuguma noola”. Hadaba aan kula taliyo, inta badan ganacsiga ka jira gudaha Soomaaliya cimirigiisa aad ayuu u gaaban yahay, balse maxaa keenay? Ganacsiga Soomaalida inta badan sidaas uma sii cimri dheera, waanu ogsoonahay in waxwalbo Illahay swc sawabtiisa ay ku jiraan balse haddii ganacsiga uu ku dhisanyahay aqqoon iyo waayo aragnimo dheer wuxuu noqdaa mid aad u cimri dheer. Aan soo …
Horumarka uu sameeyo ganacsigaada ma ahan wax hal maalin ku yimaada ee waa wax marwalbo qaato wakhti dheer. Si aad u hesho guulo la taaban karo ee ku aadan ganacsigaada waxaa wanaagsan inaad ogaato waxa loo yaqaano horumarka ganacsiga. Mudooyin badan ayaa aad loo tafatiray waxa loo yaqaano horumarka ganacsiga (business development). Ganacsiga wuxuu kasoo bilow maa meel hoose waxaana marwalbo sarre u qaadi karo waa aas-aasihii fikrada ganacsigaas. Marwalbo markii aad bilaabayso ganacsi waxaa wanaagsan inaad ogaato ama aad ku sameyso qiimeyn tafatiran ee ku aadan inaad faa’ido ka heli doonto ganacsigaas iyo inkale. Maxaa yeelay haddii aadan ogaani …
Dadka waxay aad u jecelyihiin inay helaan shahaadada jaamacada ee loo yaqaano Bachelor degree oo ah heerka koowaad ee jaamacada. Sawabtoo ah dadka waxay aminsanyihiin haddii ay jaamacad kasoo baxaan waxay heli doonaan shaqo wanaagsan oo lacag fiican leh. Inaad sameyso lacag badan waa wax fudud wali adigoon haysanin shahaado jaamacadeed. Marka horre waxaan shaki ku jirin inaad aado oo aad wax soo barato waa wax wanaagsan kuna wanaagsan nafsadaada. Waxayna kuu tahay sharaf, sharaftaasna waxaa ku faano waa qoyskaada, caruurtaada iyo waliba dhammaan asxaabta kugu heerarsan. Balse maxaan sameyni karaa haddii aanan haysanin shaaho jaamacadeed, ma daruuri miyaa inaan …
Maalgelinta & MaaliyaddaMaamulka Ganacsiga & SuuqgeyntaMaqal & MuuqaalXirfadaha & Teknolojiyada
Haddii aad tahay ganacsade mise aad jeceshahay inaad noqoto milkiile shirkadeed, waxaad tahay shaqsi rabo inuu dhaqaalo iyo horumar kusoo kordhiyo dadkiisa iyo dalkiisa. Waxaa jira shirkado badan oo calamka ka jira oo qaarkiisa ku guuldareysteen inay wax badan ka fahmaan dhaqamada ka jira caalamka. Caalamka aanu ku noolnahay waxaa ka jira dhaqamo kala duwan, sidda diimaha iyo waxyaabo kale oo quseeyo dadka kale. Haddii hamigaada yahay inaad yeelato ama aad ku haminayso in dhirkadaada noqoto shirkad caalami oo ka hawlgeli karto dhammaan daafaha dunidda waxaad u baahantahay inaad wax badan ka barayo dhaqamada kale duwan ee bulshooyinka ku nool …